Ewepụghị okpu okpu
N'èzí na-echebe Ngwaahịa
Mbata Ngwaahịa: Ọnụ ọnụ dị larịị, dị ka aha ya na-egosi, pụtara na ọnụ okpu dị larịị. Mana o nwere nkuju karịa ọtụtụ okpu baseball. Ugbu a, a na-eyi ọtụtụ okpu-kpuchiri ekpuchi maka uwe dabara ma ọ bụ chọọ mma. Dị ka elu okpu, ọ nwere ọrụ karịa iji gosipụta ụdị. Njirimara kachasị nke okpu dị larịị bụ na okpu ahụ dị omimi, ọ ga-apụta ihe atọ dị ukwuu mgbe a na-eyi ya. Ejiri okpu eji emechi anyi bu ihe eji eme ya, ejiri okpu ...
Ọnụ ọnụ dị larịị, dị ka aha ya na-egosi, pụtara na ọnụ okpu dị larịị. Mana o nwere nkuju karịa ọtụtụ okpu baseball. Ugbu a, a na-eyi ọtụtụ okpu-kpuchiri ekpuchi maka uwe dabara ma ọ bụ chọọ mma. Dị ka elu okpu, ọ nwere ọrụ karịa iji gosipụta ụdị. Njirimara kachasị nke okpu dị larịị bụ na okpu ahụ dị omimi, ọ ga-apụta ihe atọ dị ukwuu mgbe a na-eyi ya. Ejiri okpu mkpuchi anyị dị larịị, yana okpu ahụ kpuchie oghere iji hụ na ọ dị mma ma na-eku ume. Colorcha ọcha dị mfe ma mara mma na agba agba ozuzo dị ala, profaịlụ dị ala ma na-adịgide adịgide na ụdị ejiji ma enweghị ikwubiga okwu ókè. O nwekwara ume iku ume, nkasi obi na oke nkenke kwesịrị ekwesị maka iyi n’afọ niile. Okpu okpu a na-abụ ụdị ejiji ejiji. Ọ bụ ụdị kpochapụ ma nwee ike jikọta ya na ihe niile. Enwere akara 8 dị mma na ọnụ okpu ahụ, nke na-agba ọsọ ma na-akpachi anya, na-egosipụta ogo teknụzụ dị mma.
A na-ejikarị okpu iji gosipụta ihe ngosi ahụ, n'agbanyeghị agbanyeghị uwe nkịtị ị na-eyi, ọ bụrụhaala na egwuregwu ahụ kwesịrị ịdị mma maka okpu ahụ, ụdị ejiji gị ga-apụta ozugbo. Ma okpu brimmed na okpu baseball bụ ụdị okpu a ma ama, nke nwere mmetụta dị jụụ ma mara mma, yabụ ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ nwere ike iyi ha.
Usoro mmezi nke okpu dị larịị: 1. Mgbe i wepụsịrị okpu ahụ etinyela ya n'ọgba aghara, etinyekwala uwe mkpuchi ahụ ma ọ bụ pinye okpu ahụ na uwe, iji zere ka ọ ghara ịdị. 2. Hichaa unyi n'oge ma jiri nwayọọ hichaa elu nke okpu ahụ na ahịhịa dị nro, mmetụta ga-aka mma. 3. Mgbe ị na-echekwa okpu, debe ihe dị n’akụkụ okpu iji mee ka ọ kọọ. 4. Thezọ kachasị mma iji chekwaa okpu gị bụ idobe ya n'ụdị site na itinye ya n'ime igbe kwesịrị ekwesị nke ejiri spitball dị nro ma ọ bụ bọọlụ dị nro. Aro ịsa ahụ: asachala, sook ma ọ bụ igwe.
Nke gara aga: Cgba ígwè headgear
Mink okpu Site aka kpara
Cgba ígwè headgear
Ejiji okpu baseball
kpakpando baseball okpu